China Inogona kuraswa kumeso masiki 3 dura firita neelastic earloop, grey inofema yekuchengetedza chengetedzo mask. fekitori nevatengesi | Meimao Kurapa
3 dzvanya kuvhiya kumeso mask ...
Disposable zvokurapa chifi zvaiti ...
Disposable kumeso mask 3 laye ...
Disposable kumeso masiki 3 dura firita ine elastic earloop, pfumbu inofema chengetedzo inodzivirira mask.
Mask maficha:1. 3ply Dziviriro Mask, Inofema uye Inonyaradza Inoraswa,
2. Kuzora guruva uye zvinosvibisa mumhepo, mhando yeguruva mask
3. Yakavakirwa-mumhino zambuko bhiripiti, pinda kuumbwa kudzikisa leakage rate
4. Yakakwira-yakasununguka, iri nyore pa / kuvhara nzeve loop mask uye isina-kumanikidza kune nzeve mbiri
5.Meso nhovo dhizaini, Nyore kutakura nekuchengetedza
6. Inonyaradza uye inofema nzeve yebhandi
7. Muchena Anoraswa Mask
8. Sangana neyakajairwa EN149 uye FDA mask
9.With CE vanotenderwa, FDA mvumo masiki
Pchigadzirwa: Yakagadzirwa new PP isina-yakarukwa jira + yakanyunguduka spray nonwoven machira. Frist rukoko rweyakaomeswa nyungudika pfapfaidzo isina kuvezwa machira mafirita emicron- mwero guruva. Chechipiri dura rinopa sefa yehuwandu hwezvinhu zvidiki. Yetatu nhete yespunbond nonwoven jira rinosefa kubvisa mhando dzese dzezvinhu zvinokuvadza.
Firita kunyatsoshanda: Sefa kunze kweanopfuura 95% emweya mweya, inokuchengetedza kure nezvinosvibisa uye ma allergener, uye zvakare yakakwana kune zvipfuwo allergen. Masiketi ekudzivirira anobatsira kudzivirira kukosora nekuhotsira mvura kuti isapinda mumhuno nemukanwa. Matatu matatu ekudzivirira anobatsira iwe kunatsa mweya wega wega uye kuuchengeta usina kuchena.
Chivharo chinodzivirirwa pasi pezviitiko - zviitiko zvemhuri, vagari vakapararira, Kunze zviitiko, Vashandi nevadzidzi munzvimbo dzinofefetera zvakanaka
Tarisa uone kuti kurongedza kwakamira
Tarisa kunze kwekutakura chiratidzo
Tarisa uone kugadzirwa uye kupera mazuva
Ive neshuwa yekushandisa chigadzirwa mukati menguva yekudzivirira
[50PCS Mhando dzeMasikisi] Maketeni edu ekudzivirira anokwanisa kuraswa. Zvigadzirwa edu pamwe FDA uye CE vanopupurirwa. Kana pane chero chikonzero usiri kufara nechedu chigadzirwa, ndapota taura nesu.
[3-yakatetepa Inodzivirira] Yakagadzirwa yemhando yepamusoro isina-yakarukwa zvinhu. Iyo masiki anoraswa ane ganda-anoshamwaridzika, akasununguka uye anofema.
[Yakakwira Elastic Nzeve Bhendi] Nyoro, dzakasununguka nzeve mabhendi aigona kubvisa kumanikidza kune nzeve kuitira kwakanyanya kunyaradzwa. Iyo yakakwira elasticity dhizaini inoita iyo mask yakakodzera vakuru kana vana.
[Inokodzera Kushandiswa] Masiki ekumeso akakodzera Hofisi, imba, saloni, kuchovha mabhasikoro, grocery. Masiki aya anogona kushandiswa kuchengetedza kwemazuva ese, uye KWETE KUSVIRA KWEMAHARA KUSHANDISWA.
[Nyore Kushandisa] Bata tambo dziri panzeve dzako wobva wadzvanya tambo yesimbi yakakomberedza mhino dzako kuti ugadzire mucherechedzo wechiedza kumeso kwako.
Mamiriro Ekuchengetedza: Ramba uri 0-30 °, Yaro inofanira kuchengetwa munzvimbo ine mweya wakanaka, ine rima uye yakaoma uye kure nemoto masosi uye zvinosvibisa
Ukoshi: gore rimwe mushure mekugadzirwa
Origin: Yakagadzirwa muChina
Pashure: 3 PLY kumeso chifukidzo chinoraswa earloop kusvibisa hutano kuchengetedza unodzivirira guruva firita PPE muromo mhino nhoo
Disposable chiso chifukidzo 3 rukoko Sefa pamwe elasti ...
3 PLY kumeso chifukidzo kuraswa earloop kusvibiswa iye ...
3 ply yekuvhiya kumeso mask neEC / FDA kuraswa ...